पुडासैनी र रवि लामिछाने प्रकरणमा कलाकारले के भने? – PanchKhal Online
Home/समाचार/पुडासैनी र रवि लामिछाने प्रकरणमा कलाकारले के भने?
पुडासैनी र रवि लामिछाने प्रकरणमा कलाकारले के भने?
काठमाडौं– कलाकारहरुले प्रहरी हिरासतमा रहेका टिभी प्रस्तोता रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा निश्पक्ष तथा स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरुले लामिछानेको रिहाईको माग पनि गरे।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लबको अन्तरक्रियामा बोल्दै कलाकार दीपकराज गिरीले रवि लामिछाने भोलि रिहाई हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले रवि लामिछानेको लागि धेरै समर्थन रहेको पनि सुनाए। उनले भने, ‘उहाँको पक्षमा ठूलो समर्थन छ। अहिले हामीले कानून संशोधन गरेका छौं। म त कानूनमै दोष देख्छु। आक्षेप लगाउने मान्छे १०० प्रतिशत सत्य हुँदैन्। कानून सुधार गर्नुपर्छ। यदि कोही मान्छेले म त मर्छु र अरुलाई पनि दुःख दिन्छु भन्यो भने धेरै मान्छे कष्टडीमा हुन्छन्।’
उनले आफू र रवि लामिछानेबीच निकै लामो मित्रता रहेको सुनाए। उनले भने, ‘मित्रताको कारणले म यहाँ आएको होईन । म सत्यको पक्षमा बोलुँ भनेर सधैं कोसिस गर्छु। रवि निर्दोष छ। रविजीले सामान्य मानिसको आवाज उठाईदिनुभयो, त्यसैले आज न्याय पाउनुपर्छ। भोलि नजिर बस्न सक्छ, जिन्दगीबाट हारेको मान्छेले आरोप लगाएर मरिदिनसक्छ।’
गिरीले आत्महत्या भनेको आफैंमा अपराध भएको सुनाए। ‘यो केशमा भोलि न्याय हुनेछ। रविजीले भोलि न्याय पाउनुहुन्छ’, उनले थपे। उनले कानूनमै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘राज्यले रविजीलाई न्याय दिनेछ । रिहाई भएर जनताको आवाज लिएर फेरि आफ्नो कर्ममा फर्किनुहुन्छ। राज्यले पनि गम्भीर विचार गर्नुपर्छ। जनताको नायकलाई जबरजस्ती खलनायक बनाउने काम गर्नुभएन।’
तर, उनले भीडले न्याय नदिने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको सुनाए। यद्यपि उनले हिजो राजाको शासनको पालामा भीडले परिवर्तन ल्याएको कुरा बिर्सन नहुने सम्झाए। उनले भने, ‘तर, कारणसहितको भीड हुनुपर्छ।’
अर्का कलाकार निखिल उप्रेतीले विशुद्ध नेपाली झण्डामुनि बसेर सत्य बोल्ने मान्छेले नेपालमा दुःख पाउने सुनाए। उनले पछिल्लो समय मानवता खत्तम भएको र सत्य भन्ने चीज हराएको सुनाए। उप्रेतीले भने, ‘हामी सत्यको पक्षमा लडौं।’ देश र जनताप्रति राजनीतिक गर्ने व्यक्तिहरु ईमानदार हुनुपर्ने उनको भनाई छ। तर, शक्ति केन्द्रीत भएपछि मान्छे नशामा केन्द्रित हुने उनले प्रष्ट्याए।
उनले अघि थपे, ‘रविजी त पपुलर हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो आवाज प्रष्ट भनिरहेका छन्। कानूनको व्याख्या नै गलत छन् भने कानूनले कसरी काम गर्छ? नेपाली झण्डाको मुनि बसेर काम गरौं। रविजीलाई मात्रै होइन, यहाँ स्वतन्त्र रुपमा सत्यको पक्षमा लड्नेमाथि यो अवस्था सिर्जना गरिन्छ। क्राईम गरेको व्यक्तिलाई डर हुन्छ। हामीले लड्नुपर्ने यसको विरोधमा हो। हामी रविजीको पक्षमा एकजुट हौं। धेरै विश्लेषण नगरौं।’
उनले नेपालमा सही व्यक्ति र पार्टीको रंग नलागेको व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो अवस्था रहेको सुनाए।
अर्का कलाकार रमेश उप्रेतीले रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा छिटोभन्दा छिटो छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। उनले रवि लामिछाने स–सम्मान छुट्नुहोस भनेर प्रार्थना गर्न आग्रह गरे। तर, यो प्रकरणमा दोषी भए रविले पनि सजाय पाउनुपर्ने उनको भनाई छ। उनले थपे, ‘उहाँ पनि कानूनभन्दा माथि हुनुहुन्न।’ यद्यपि उनले हिरासतभन्दा बाहिर राखेरपनि रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सकिनेमा त्यसो नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
कार्यक्रममा कलाकार निर्मल शर्मा ‘गैंडा’ ले पनि रवि लामिछाने निर्दोष रहेको भन्दै भोलि रिहाई हुने विश्वस दिलाए। त्यस्तै अर्का कलाकार अनुराग कुँवरले रवि लामिछानेले न्याय पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले भने, ‘रविजी निर्दोष हुनुहुन्छ। उहाँले न्याय पाउनुपर्छ।’
पत्रकार ऋषि धमलाले आफू पनि रवि लामिछानेले न्याय पाउनुपर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। उनले स्वतन्त्र र निश्पक्ष रुपमा छानबिन गर्न दिनुपर्ने भन्दै दबाब र भीडले छानबिन प्रक्रियामा असर पुर्याउन नहुनेतर्फ सचेत गराए। उनले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको परिवारले पनि न्याय पाउनुपर्ने बताए।